Dallada Jaaliyadaha Somaliland Ee Qaarada Yurub SSE Oo Soo Bandhigtay Dacwad Ka Dhan Ah Mashruuca Fursad Fund
(Hadhwanaagnews) Monday, February 12, 2018 17:20:25
Hargeysa(HWN):-Dallada jaaliyadaha somaliland ee qaarada Yurub SSE(Somaliland Society In Europe) ayaa soo saartay dacwad ka dhan ah mashruuca fursad fund oo ay ku eedaysay inuu ka soo horjeedo qaranimada somaliland.
Gudoomiyaha dallada SSE oo war murtiyeed uu soo saaray soo gaadhsiiyey Hadhwanagnews ayaa soo bandhigay sida mashruuca fursad Fund u jabiyey sharciga somaliland, waxaanu war murtiyeedkaasi u dhignaa sidan:-
Uj:-Dacwad ka dhan ah khatarta iyo hagardaamada mashruuca Fursad Fund
Waxa hubaal ah
in Jamhuuriyadda Somaliland lagu hayo dagaal siyaasadeed oo halis ku ah qaranimada isla markaana leh wejiyo badan. Beryahan dambe waxa Somaliland loogu soo gabanayay dhinacyada ururada aan dowliga aheyn ee ujeedadoodu tahay inay fuliyaan hawlo samo-fal ah.
Bayaankan waxaynu si gaara diirada u saaraynaa mashruuca ama barnaamijka Fursad Fund.
Mashruucan Fursad Fund waa mid himilooyinkiisa laga hagayo Soomaaliya, kaas oo hadafkiisa iyo ujeedadiisu ay tahay u adeega arrimaha Somaliweyn laguna wiiqaayo jiritaanka iyo qaranimadda Somaliland.
Sida ku cad qaab-dhismeedka barnaamijkan mashruucan waxa wada koox uu hoggaaminayo Wasiirkii Qorshaynta xukuumaddii Xasan Sheekh ee lagu magacaabo Cabdiraxmaan Caynte (oo uu isagu aasaskiisa lahaa) oo hadda ah Safiirka Somaliya ee dalka UK.
Ururkani waa mid had iyo jeer ku foogan furfurka iyo kala qaybinta bulshada somaliland, gaar ahaana dhallinyarada si loo daciifiyo fikirkooda wadaninimo ee ku aadan aaminsanaanta jiritaanka Somaliland.
1.7 Maxamed Cumar: dhiirri geliye dhallinyar oo u heellan danaha da’yarta sida oo kalena ah aasaasaha iyo Agaasimaha Mac-hadka Horumarinta Dadka (Human Development Institute) oo ku yaal Boorama, Soomaaliya. Waxa uu khudbado dhiirriggelin ah ka soo jeediyaa shirar dalka gudihiisa iyo dibeddiisaba ah, waxaana xaruntiisu si joogto ah tababarro ugu qabtaa dhallinyarada.
Haddaba Fursad Fund iyo joogitaankeeda Hargeysa waa mid dhaawac ku ah qaranka Somaliland waxayna xadgudub ku tahay dastuurka dalka gaar ahaana Xeerka Ururrada Samafalka ee aan dawliga ahayn (Xeer Lr. 43-2010) xeerkaas oo golaha wakiilada J.S.L. ansixiyey 2-10-2010 isla markaana Madaxweynihii hore ee Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) uu ku dhaqan geliyey digreeto Madaxweyne oo soo baxday 10-11-2010.
Wuxuu Ansixiyey Xeerkan: Qodobka 10aad oo sheegaya Waajibaadka Ururada aan dawliga ahayn.
Urur kasta oo aan dawli ahayn o si xeerkan waafaqsan lagu diwaan geliyo waxa waajib ku ah
Inuu ixtiraamo,aqoonsa madax banaanida, aaya ka tashiga qaranimada jamhuuriyada somaliland iyo caqiidada umada JSL.
Inuu ixtiraamo,kuna dhaqmo dastuurka iyo xeerarka kale ee jamhuuriyada somaliland, una hogaansamo siyaasadaha xukuumadeed iyo talooyinka xukuumada eek u wajahan wax qabadkooda
Haddaba iyada oo aan la soo koobi Karin dhacdooyinka ku aaddan arrimaha Somaliweynimada ee mashruuca Fursad Fund qaybteeda Hargeisa Job Fair, waxaa nasiib darro ah in Wasaaradda Qorsheynta Qaranku ay ogolaansho diiwaangelin siiso ururradaas ka soo horjeeda qaranimada Somaliland, iyadoo baal maraysa xilkii iyo waajibaadkii ka saarnaa ee loo igmaday xeerka kor ku xusan (Xeer Lr. 43-2010).
Dallada SSE oo si iskaa ah ugu adeegta danaha dalka iyo dadka reer Somaliland ayaa markii ay ka warheshay dhagaraha iyo khataraha ku soo wajahan Qaranka Somaliland ee la xidhiidha mashruuca Fursad Fund ayaa marar badan dacwado ka dhan ah arrinkan u gudbiyay dawladii hore. Dacwadahaa ay Dalladu gudbisay waxa la socdey faahfaahimo dheeraad ah iyo weliba cadeymo si cad u muujinaya khataraha uu wato mashruucani.
Cadeymaha ay Dalladu gudbisay wax aka mid ahaa:-
Dallada SSE waxay arrinkan wax-ka qabashadiisa si gaara ugula xidhiidhay Wasiirka Arrimaha Dibedda ee Somaliland Dr. Sacad Cali Shire iyo weliba Wasiirkii hore ee Qorsheynta Qaranka Maxamed Ibraahin Aadan (qabo) oo isaga arrinkani si gaara u khuseynayay.
Wasiirkii hore ee qorsheynta qaranku wuxuu Dallada SSE u balan qaaday ilaa afar jeer in uu tallaabo ka qaadi doono sidii loo joojin lahaa mashruucaa balse Waxaa nasiib daro ah in wasiirkaasi xilka ka degay iyada oo aanu waxba ka fulin ballanqaadyadii ahaa sidii loo xidhi lahaa mashruuca Fursad Fund.
Dalladu waxay aaminsan tahay in wax-ka-qabasho la’aanta mashaariicdani ay yihiin qaar wiiqaya sharcigeenna isla markaana laga dhaxli karo cawaaqib xumo.